Uma une imikhawulo yokuhlukanisa, kuvamise izizathu ngenxa ezimbili eziyinhloko. inyumbazane labo okufanele usizo ukuqeda le nkinga.
Naphezu kweqiniso lokuthi nezinwele izicubu efile, kufanele moisturize njalo. hydration yabo kuncike ngokuyinhloko lemali uphuza. Kusolwa ukuthi umuntu omdala (kuncike ubude nesisindo) kufanele baphuze nengxenye amalitha amabili nesigamu yamanzi ngosuku. Kuyinto efiselekayo ukuthi kwaba entwasahlobo noma lamanzi esiphethu. Kodwa kufanele wazi ukuthi namaminerali amaningi kakhulu kuyingozi empilweni.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi itiye nekhofi kungukuthi kufakwe nsuku uketshezi eyanele esele, njengoba lezi iziphuzo ezimbili omisiwe umzimba. Ukuphuza amanzi kancane kakhulu kuholela yokuthi ngokuyinhloko kuziwa izitho ezibalulekile zomzimba, futhi izinwele, njengoba umthetho, akwanele.
Ikakhulukazi ezibalulekile amafutha izinwele, lapho izinga lokushisa emoyeni kakhulu noma eliphansi uma kuziwa ukuba ebusika izakhiwo evuthayo ngaphandle humidification.
Alone akuyona amanzi anele ukuphuza. izinwele Split kungadalwa ukunganakekeli kahle ngabo. Kunezici eziningi ukunakekelwa kungabangela ichopho ngokuhlukana.
Hlukanisa uphela kwenzeka lapho kuba kabi amadivayisi ezithile. ukusetshenziswa kakhulu njalo curling ezinsimbini noma izinwele yensimbi, ikakhulukazi ngaphandle izimonyo, ukuvikela izinwele ukushisa - kakhulu evame ukuba abasebenzisi ekuvikeleni lezi amadivaysi ukhohlwe bome amathiphu, ngaleso sikhatsi bafundza bacala zahlukana.
Sicela uqaphele ukuthi sebum Athambisa izinwele futhi uyabavikela abe 'kusukela iziphi izici zangaphandle. Nokho, lapho nezinwele ezinde eside ke awufiki amathiphu zazo ngaleyo ndlela zibancishe ukuvikelwa kwabo okungokwemvelo. Ngakho-ke kubalulekile ukuba unakekele lo nokongiwa ukumanzisa amathiphu, futhi abenzele ungqimba zokuzivikela ngokusebenzisa, isibonelo, uketshezi usilika noma amanye amalungiselelo akhethekile.
Kubalulekile ukunakekela izinqubo kahle. Lapho ngqo izinwele ecwaninga futhi isitayela emva ukuwasha ukwenzani lapho eyomile. Ehlelekile kudingekile ukusebenzisa buso isimo ichopho. Lapho esomile izinwele kufanele kusetshenziswe okungenani kanye ngesonto, ngaphansi evamile - kabili ngenyanga kanye okunamafutha - kanye ngenyanga.
Ngaphezu kwalokho, ukudaya njalo futhi perming izinwele ezingezinhle, ikakhulukazi ukuthola amathiphu zabo.
Ukunakekela imikhawulo yokuhlukanisa
Esimweni lapho imikhawulo bafa, kodwa okwamanje ayikho indlela ukusika kulona usebenzisa ingcina ekhethekile inamathela ndawonye curls yokuhlukanisa okwesikhashana futhi ivumela ukuthi zikhule kancane.
Sika amathiphu udinga alandele imithetho ethile: ukusika okungenani 2,5 ngaphezu bifurcation, hhayi ukwenza kube non-acute sikelo, okuyinto kungalimaza emikhawulweni izinwele, okuyinto yena, kuholela bifurcation.
Abantu abaningi abaqapheli ukuthi ukuhlukaniswa uphela, uma kungenziwanga ngokushesha anqunywe, singayibhubhisa sonke izinwele, edwengula ke kuze kube sekupheleni.
emabhulashini plastic kufanele kugwenywe, kanye emabhulashini zensimbi namazinyo ezingenziwanga ivikelwe ibhola plastic.
Kaningi uhlukanise emaphethelweni - inkinga ehlobo lapho bavezwa isenzo ilanga, oswakanyiswe olwandle noma ichibi, lapho amanzi ocebile emanzini ane-chlorine.
Imbangela ezivamile Isimo esibi nezinwele nokuntuleka amavithamini namaminerali emzimbeni. Kulokhu, udinga ukuthatha imithi aqukethe kubo. Kodwa ukudla amavithamini namaminerali, kufanele uxhumane nodokotela, okwathi ngemva ukuhlolwa igazi izocacisa uma kukhona ngempela kuyinto kusilela yezingxenye ezahlukene.
Ikhaya izinwele ukunakekelwa kungenziwa ngcono ngoku bezihlikihla amathiphu kancane omnqumo, ocolisekileyo noma uwoyela kakhukhunathi.
Ikhishi Okuhlobene: izibuyekezo izinwele izimonyo